Uchwepheshe we-Semalt: Kungani izinkinobho zewebhsayithi zikhombisa ku-Google Analytics
I-inthanethi ibasiza amabhizinisi amaningi ukuba aphumelele ku-intanethi ngezohwebo zabo ze-e-commerce. Ngendlela efanayo, kunezingxenye ezilinganayo zenqubo yonke abaduni kanye nabanye abantu abanobubi abazama ukufeza imizamo yabo ye-inthanethi. Amabhizinisi amaningi athola amaklayenti abo ku-intanethi ngokusungula izinkampani eziphumelelayo ze-e-commerce. Ngokuthi ukumaketha kwedijithali , kungenzeka ukufaka imizamo eminingi yokwenza ama-imeyili ogaxekile uphelelwe ngokuphelele ebhokisini lakho lokungenayo. Okokuqala, amakhono wokumaketha okudijithali alethe amathuluzi amasha ukuzenzekelayo izinqubo ezifana ne-Search Engine Automation (SEO).
Amanye amathuluzi wokuthengisa we-inthanethi alawulwa ukuhlaselwa kogaxekile - free vps unlimited traffic. Kudingeka ukuthi uvimbele ukugaxekile kogaxekile kwezinye zamathuluzi ukwenza konke ukuphequlula kwewebhusayithi yakho kuphephile. Khumbula, ukulondeka kwesayithi lakho kuxhomeke kumasu okulwa nogaxekile endaweni ukuvimbela ugaxekile wokudluliselwa. Ungavikela ulwazi lomvakashi wakho kanye nokuzinza kwebhizinisi lakho. I-Google Analytics iyithuluzi elijwayelekile le-SEO abaningi be-webmasters abangathola ukuwusizo kumikhankaso eminingi yokumaketha. Ukuvimbela ugaxekile wokudlulisela okufana nezinkinobho ze-Iwebhusayithi kusuka ku-Google Analytics kungenzeka.
U-Lisa Mitchell, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uchaza lapha ukuthi ungavimbela kanjani ugaxekile wokudluliselwa njengezigqila zeWebhu.
Ku-Google Analytics, ungakwazi ukulahla ithrafikhi evela ezizindeni ezithile. Kungenzeka ukuthi ulungise izindlela ezingenza ulwazi lwakho lwe-analytics lukhululekile kwedatha yokugaxekile yogaxekile. Amanye alawa ma-metrics ukuguqula ukuhlaziywa kwedatha yebhizinisi eholele ezibalo zamanga.
Kunamasu ambalwa webmasters angasebenzisa ukuvikela amawebhusayithi abo kusuka kubhoksi yeWebhu noma iDarodar:
Sebenzisa ama-imeyili aphephile
Ukusebenzisa umhlinzeki we-imeyili ophephile ukuvikela izivakashi zakho ezivela kubaduni kuyisinyathelo esihle. Ezinye zezizinda ezijwayelekile eziqukethe ugaxekile wokudluliselwa zivela emithonjeni engaziwa. Abahlinzeki be-imeyili bangavikela izilaleli zakho kusuka kumakhoyili anjalo. Bavimbela ukubuka kuqala kwesithombe okungangenisa imizamo yokudonshulwa okunamandla.
Ku-Google Analytics, ungasebenzisa izinkinobho ze-Website Spam Filters ukuze uvimbele ukugaxekile kogaxekile kusuka kuwebhusayithi yakho yewebhu. Ungakwazi ukuqoqa ulwazi olunembile mayelana nokusebenza kwewebhusayithi yakho nokufeza izinzuzo eziningi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuvikela ukuxhumana okunamandla kwesizinda sakho ngenxa yezinyathelo zokuphepha kuwebhusayithi yakho.
Gcina izethameli zakho ngolwazi lwe-SEO mayelana nokusebenza kwewebhusayithi yakho. Kudingeka bazi ukuthi nini futhi kanjani ukunganaki ukugaxekile okuthunyelwe njengamasela ekhadi lesikweletu.
Yonke indawo ye-e-commerce iqukethe izindlela eziningi abantu abangathola ngazo amathuba amakethe. Amabhizinisi aphumelelayo enza izinkampani ze-e-commerce ukwenza amawebhusayithi abo alethe amakhasimende amaningi avela ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Ngokumaketha kwedijithali, kungenzeka ukuthi ulandele ithrafikhi yabantu abayizaklayenti ezikhona. Ngesilinganiso esifanayo, abantu abaningi bangase bafune ukuletha izivakashi ezivela emithonjeni yabo ehlukahlukene ukusiza inqubo yokuthengisa. Kubalulekile ukuvimbela ugaxekile wokudlulisela ku-panel Analytics yakho ye-Google Analytics bese ulondoloza ibhizinisi lakho kusuka ekulahlekelweni okukhulu. Lo mhlahlandlela we-SEO uchaza ukuthi kungani futhi ungamisa kanjani i-Darodar nezinkinobho zokugaxeka kogaxekile kwiwebhusayithi ku-Google Analytics yakho.